Sandals Resorts South Coast na-ekpughe Atụmatụ Atụmatụ Ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Sandals Resorts South Coast na-ekpughe Atụmatụ Atụmatụ Ọhụrụ
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Sandals Resorts International, ụlọ ọrụ niile, ewepụtara atụmatụ atumatu nke ọtụtụ nde dollar mmegharị na ọmarịcha agwaetiti Jamaica, Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ South Coast. Tọọ ka mpụta mbụ na Disemba a, ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya oge ọhụụ maka ụlọ ọrụ ezumike yana mgbakwunye nke Swim-up Rondoval ™ Suites nke izizi ụwa, nke etinyere n'ogige ọdọ mmiri 17,040 sq.Ft. Ndi ozo g’enwe obi uto n’ime ime obodo ndi Dutch 112-room reimagim na nnuku uzo ohuru ohuru. A na-agbakwunye ebe agbamakwụkwọ lush nke oge a iji chọọ ogige ahụ mma na Obodo Ndị Obodo Itali.
N'iburu ụzọ webata atụmatụ Rondoval dị na Sandals Grande Antigua, yana Sandals Grande St. Lucian, Sandals Grenada na Sandals Royal Barbados, Sandals South Coast ga ugbu a seta ihe ozo di iche ya na mgbe mbu Swim-Up Rondoval Suites. Ezubere ka ọ bụrụ ebe mara mma nke dịpụrụ adịpụ site na ụzọ ụwa, 20 Swim-up Rondoval Suites ga-atụ otu nnukwu ụkwụ 22 na dayameta na 20-foot conical ceil. Na-eme ka ndị ọbịa bịarukwuo na mmiri ahụ nso karịa ka ọ dị na mbụ, ụlọ ndị ahụ dị gburugburu ga-enwe ọdọ mmiri ndị na-asọda nke nwere isi iyi ndị nwere ọ glassụ Italianụ ndị Itali na limestone ndị Indonesia. Ihe ngosi nke ihe ọhụrụ gụnyere ịnweta ọdọ mmiri 17,040 sq.Ft.Ful, ọdọ mmiri kachasị ogologo na Western Hemisphere, nke na-eme ka obi dị jụụ nke na-atụgharị uche ran maka mmadụ abụọ na mma wicker n'ime ụlọ na-elegharị anya na echiche ndị dị n'èzí. A ga-eme akwa ihe site na ụwa dum, ụlọ ịsa ahụ ga-eji ihe nzuzu Hollywood nwere enyo na-enweghị isi, ma n'èzí, ime ụlọ ezumike nke oge a ga-emeju coral sundeck nkeonwe. Di na nwunye ga-enwe mmasị amkpachasị anya nke onye ọ butụ butụ, nke ndị Guild of Professional English Butlers zụrụ, na-enye ha ihe zuru oke n'oge niile ha nọrọ.
N'ihe na-atụ anya na ndị njem na-eme njem n'ọgbọ na-esote, Dutch Village nke ebe a ga-enwe mmezigharị zuru oke na-eme ka ebe maka ezumike nke oge a nke sitere n'oké osimiri. Iteslọ ndị a echetaghachiri ga-abụ isi maka ịma mma nke mmiri site na iji acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo na-achapụ iche. Obodo ime ụlọ 112 - nke mejupụtara 16 Butler Elite suites na 96 Club na ime ụlọ okomoko ga-agụnye tubs na mmiri na-anaghị akwụ ụgwọ n'ime ụlọ, izu ike izu ike na-atọ ụtọ ™ abụọ, na igwu mmiri-elu ohere site na ọdọ mmiri nkeonwe ịhọrọ edemede.
"Sandals South Coast bụ otu n'ime ebe kachasị mma na ala Jamaica na-enweghị atụ," ka Gordon "Butch" Stewart kwuru, Onye isi oche nke Sandal Resorts. “Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ karịa ihe anyị tụrụ anya ya na oge ọzọ, na Sandals South Coast ọhụrụ ga-eme nke ahụ na ndị ọzọ. Ebe a na-eme ezumike nke a gbakọrọ n'ime ala 500-acre na-echekwa, tinyere mmiri na-acha anụnụ anụnụ bụ mkpali anyị maka ọrụ ngo a bara ụba. Anyị enweghị ike ichere ka ndị ọbịa anyị nweta ọhụụ ọhụụ ọhụụ a. ” Stewart gara n'ihu.
Ihe nkwalite ndị a ga - esonye na atụmatụ ụlọ ihe eji eme ihe ugbua, dị ka ụlọ elu Bungalows, mmiri na mmiri, na ebe mmiri na-enye 360 ​​ogo nke oke osimiri.
Sandals South Coast ga-emepe ọzọ na Ọktọba 1, 2020. Ndị ọhụrụ na-egwu mmiri Swim-Up Rondoval Suites na ndị Dutch Village suites na-anakwere ndoputa maka ndị mbata na-amalite na Disemba 10, 2020. Iji debe akwụkwọ ezumike Luxury gị gụnyere na otu n'ime ụlọ ndị a na-adọrọ mmasị, nleta: https://www.sandals.com/south-coast/.